တစ်နေကုန်မိတ်ကပ်တွေလိမ်းရလို့ အဆီပြန်တာတွေ မိတ်ကပ်ကွက်တာတွေ မကြုံရလေအောင်……. | CosmeticMyanmar
Home » Article » တစ်နေကုန်မိတ်ကပ်တွေလိမ်းရလို့ အဆီပြန်တာတွေ မိတ်ကပ်ကွက်တာတွေ မကြုံရလေအောင်…….
တစ်နေကုန်မိတ်ကပ်တွေလိမ်းရလို့ အဆီပြန်တာတွေ မိတ်ကပ်ကွက်တာတွေ မကြုံရလေအောင်…….
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ မိတ်ကပ်တွေ ကြာရှည်ခံရန် မကွက်ရန်အတွက် MAKEUP SETTING SPRAY ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မိတ်ကပ် spray တွေကို တော်တော်များများအသုံးပြုလာတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Make Up Spray အသုံးပြုရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်နေကုန်အပြင်သွားရတဲ့အချိန် ရုံးတက်ရတဲ့အချိန် ကျောင်းတက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာ SETTING SPRAY ကိုသုံးပေးထားရင် မိမိလိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေဟာ မျက်နှာပေါ်မှာ ကြာရှည်ခံမယ် မိတ်ကပ်ကွက်တာတွေ ဘာတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာကတော့ မိတ်ကပ် Spray သုံးဖို့ ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အလွယ်သုံးလို့ရပြီး မျက်နှာကိုဖြန်းတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးခြောက်သွေ့မှုပေးနိုင်တဲ့ Spray မျိုးကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့မှု နှေးကွေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကို ရွေးချယ်မိရင်တော့ စိတ်သက်တောင့်သက်သာ မရှိတာမျိုးတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး အခက်ခဲတွေ မကြုံတွေ့ရအောင် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးကတော့ NYX ရဲ့ MAKEUP SETTING SPRAY – MATTE ဆိုတဲ့ Make Up Spray လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပြီး Spray ဖြန်းပေးတဲ့အခါမှာ မိမိလိမ်းထားသော မိတ်ကပ်တွေဟာ သာမန်ထက်အရောင်တွေပိုပြီးတောက်ပလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်မိတ်ကပ်လိမ်းထားတာ အချိန်ကြာလာရင် အဆီပြန်တာတွေ မိတ်ကပ်ကွက်တာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ MAKEUP SETTING SPRAY ဖြန်းပေးလိုက်ရင် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကင်းဝေးသွားစေမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ သူကအမြန်ဆုံးခြောက်သွေ့မှုကို ပေးနိုင်တာမို့ သုံးရတာသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။
သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့ မျက်နှာမှာမိတ်ကပ်တွေအားလုံးလိမ်းပြီးပြီဆိုရင် ၆လက်မအကွာလောက်ကနေ မျက်နှာကို Spray လေးဖြန်းပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အကယ်၍ မိတ်ကပ်ကို ၈နာရီနီးပါးလောက်ထိ လိမ်းထားရလို့ အဆီပြန်မှာကြောက်တဲ့အခါ အဆီပြန်ခြင်းကင်းပြီး အသားကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားပြီး အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ ကဲ ဒါဆို တစ်နေကုန်မိတ်ကပ်တွေလိမ်းရလို့ အဆီပြန်တာတွေ မိတ်ကပ်ကွက်တာတွေ မကြုံရလေအောင် NYX ရဲ့ ဒီ MAKEUP SETTING SPRAY လေးကို ဆောင်ထားလိုက်ကြရအောင်လေနော်။ ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ စျေးနှုန်းကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခု Link လေးမှာ ဝင်လေ့လာလို့ ရပါတယ် https://cosmeticmyanmar.com/makeup-setting-spray/
Image Source : http://www.nyxcosmetics.com